Khabiirka 'Electronic Concert' wuxuu sharxayaa 404 khaladaadka loo yaqaan 'SEO'
Maxaa keena 404 ma helin qalad? Ma waxay doonayaan inay waxyeeleeyaan darajada?Su'aalahaani waxay sii wadaan inay sii wadaan maaraynta jilayaasha 'marka 404 aan la helin' qaladaadka soo socda.
Markaad boggaaga soo celiso 404 khaladaadka, khalkhalka ayaa khatar ku ahilaa UX (waayo-aragnimo user). Mar kasta oo booqde qalad ah 404, isagu / iyadu waa lagu qasbay inuu dib u eego oo dib u soo celiyo, taas oomacnaheedu wuxuu ka tagayaa boggaaga. Wixii maamulayaasha calaamadaha ama suuq geynta digital, cilladaha ayaa sababi kara argagax marka ay ku soo baxaanqalabka webmaster-ka. Si looga fogaado dhibaatooyinkan, Michael Brown, Maamulaha Guusha Macaamiisha Sare Adeegyada Digital,si taxadar leh dib ugu fiiri waxa 404 khaladaadka micnahoodu yahay SEO-gaaga iyo sida loo tirtiro saameyntooda aan loo baahnayn
Sida loo helo 404 qalad?
Isticmaal qalabyada Webmaster Google
Tani waa mid ka mid ah hababka ugu fiicansi toos ah uga baadha Google. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad gasho qalabyada webmaster-kaaga, tag Goobta oo gujiXajinta calaamadaha - web service hosting in iis7 web. Dhamaan URL-yada maqan ayaa ka muuqan doona qaybta "No Founded". Xitaa waad ka hubin kartaa garaafkakhaladaadka wakhti ka dambeeya si loo falanqeeyo.
Xirfadaha isku xiran ee xiran
Maanta, waxaa jira xayeysiisyo badan oo badan oo xitaa bilaash ahwebsite-yada sida Validator.w3org iyo Hubi Xiriiradayda. Kuwani waxay si sahlan u aqoonsan doonaan isku-xirka jaban ee ku yaal boggaaga.
Iyadoo la isticmaalayo qaylo-dhaanta Qodobka SEO Spider
La mid ah aaladaha Webmaster, SEO Spider waxay kaa caawineysaa inaad aragto dhamaan 404 qaladaad ka helin.Soo rog codsiga. Ku rakib SEO Spider oo geli boggaaga, ka dibna riix Taranka. 404 khaladaad ayaa ka muuqda XaaladdaQodobka Code..Waxa kale oo aad u gudbin kartaa warbixinta sida faylka .csv.
Waa maxay 404 khaladaadka micnaheedu yahay SEO-ga iyo sababta aad u baahan tahay si dhaqso ah wax uga qabato?
Google wuxuu ku qanacsan yahay in 404 helin qaladaadka ay mararka qaar noqoto mid lama huraan ah.Sidaa darteed, website-kaaga ma noqon doono mid la-geddisan ama ciqaabi. Si kastaba ha ahaatee, sababta oo ah diiradda Google ee diiradda saaraya tayada,SEO-gaaga ayaa u badan inuu ku dhaco wax badan. Maaddaama Google liiska ay isku-xirxiraan xiriirrada gudaha ee boggaaga, waxaa laguu calaamadeeyn doonaa xisbima xiiseynayo bixinta waayo-aragnimo fiican ee dadka. Waqti ka dib, Google ayaa joojin doona in aad boggagto boggagaaga, baabuurkuna si weyn ayuu hoos ugu dhici doonaa
Dareemayaasha waa inay ka walwalsan yihiin wax ka qabashadamacaamiish halkii laga heli lahaa boogaha Google. Dadka booqdayaasha ah, sababta ciladda khalad maaha wax waliba, waxa ay xiiseynayaanwuxuu helayaa waxyaabaha ay rabaan. Inta badan dadka soo booqda badanaaba waxay tagaan bogg kale, raacaan tartan ama ka bax. Tanimacnaheedu waa luminta gaadiidka sababta oo ah macmiilku ma qaadi karo tallaabada xigta ee ku saabsan beddelidda. Natiijo ahaan, mar walba waa mid caqli gal ahadiga oo cadeeynaya khaladaadka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah una hagaajiye si dhakhso ah.
Sida loo xalliyo 404 ma helin qalad?
Marka 404 khaladaadku dhaco, waxaa lagama maarmaan ah in lagu fududeeyo kartida macaamiisha si ay dib ugu noqoto socodka.
Isticmaal 301 dib u noqoshada joogtada ah
Haddii bog gaar ah laga saaro ama la guuro,301 dib-u-hagaajin ayaa gacan ka geysanaya in ay bogga ku soo lifaaqdo mid cusub. 301 dib-u-hagaajintu way fiicnaanayaan sababtoo ah ma waayaan awoodda bogga ee bogga hore.
faylka robots.txt waxaa loo isticmaalaa in loo sheego bootooyinka Googleboggaga gaarka ah ayaa laga saaray oo aadan ku talo jirin in lagu daboolo. Tani waa hab weyn oo wax looga qabanayo qaladka 404 marka badanboggaga ayaa laga saaray.
Inuu hagaajiyo qorista bogagaaga
Haddii aad isticmaasho Qalabyada Webmaster-ka, waxaad si sahlan u aqoonsan kartaabogagga leh xiriiro jabsan. Si sax ah u eeg boggaan si aad u xaqiijiso in isku xirka si khaldan loo qoray iyo si dhakhso ah u hagaajiyo